Simia | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Simia | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Archives ho an'ny siansa sy ny natiora / siansa / simia
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitambarana intermetallika sy ny alikaola matevina dia ny fitoviana intermetallika dia manana firafitra mitovy, fa ny padol kosa dia manana rafitra tsy mitovy. Ny fitambaran'ny intermetallika dia singa misy ny dingana mivaingana izay misy singa metaly na semi-metaly roa na maromaro voarindra ao anaty rafitra voalamina. Ny alikaola matevina dia karazana […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Hot Melt sy ny Acrylic Tape
23 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny mahasamihafa azy eo anelanelan'ny hafanana sy ny kasety akrilika dia ny fitrandrahana mafana vita amin'ny polymers thermoplastic, fa ny acrylic tape kosa dia vita amin'ny resina akrilika. Ny teny hoe mitsonika mafana sy kasety akrilika dia manondro karazana fitaovana adhesive roa samihafa. Ny fitaovana fametahana dia singa iray izay afaka mampivondrona na mampifandray ny velarana miaraka. LOHAHEVITRA […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny alikaola indostrialy sy alikaola tanteraka
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny alikaola indostrialy sy alikaola tanteraka dia ny alikaola indostrialy dia mety ho methanol na etanol miaraka amin'ny fahadiovana 95%, fa ny alikaola feno kosa dia ny etanol miaraka amin'ny fahadiovana 99%. Ny alikaola dia fitambarana organika manana ny vondrona -OH miasa. Misy endrika alikaola maro samihafa izay tena ilaina amin'ny lafiny indostrialy. Ny alikaola tanteraka dia endrika iray hafa […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Stilbite sy Heulandite
20 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny stilbite sy heulandite dia ny stilbite dia mety hitranga amin'ny rafitra kristaly monoclinika, triclinika ary orthorhombic, fa ny heulandite kosa dia miseho amin'ny rafitra kristaly monoklinika. Samy stilbite sy heulandite dia mpikambana ao amin'ny vondrona tectosilicate ary latsaka eo ambanin'ny vondrona zeolites. Ireo dia akora mineraly voajanahary. LOHAHEVITRA 1. Topy maso sy fahasamihafana lehibe […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny effervecence sy ny efflorescence
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny effervescence sy efflorescence dia ny eff effencecence dia ny fandosirana ny gazy avy amin'ny vahaolana, fa ny efflorescence kosa dia ny fifindra-mason'ny sira mankany ambonin'ny volo misy poria izay ahona mamorona firakotra. Na dia mitovy aza ny teny hoe efferescence sy efflorescence dia tsy mitovy izy ireo. Ireto teny ireto […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i Ortho sy Para Nitrophenol
19 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny ortho sy para nitrophenol dia ny molekiola ortho nitrophenol dia misy vondrona -OH sy vondrona -NO2 mifamatotra amin'ny toerana 1 sy 2 an'ny peratra benzena, fa ny para nitrophenol kosa dia misy vondrona -OH mifatotra amin'ny laharana 1 sy 4 an'ny peratra benzena. Ortho sy para nitrophenol dia […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Myristoylasi sy Palmitoylasi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny myristoylasi sy ny palmitoylasi dia ny myristoylasier dia dingana tsy azo ivalozana, fa ny palmitoylasi kosa dia dingana azo averina. Ny myristoylasi dia karazana fiovan'ny lipida fanovana izay ampiana vondrona myristoyl amin'ny kojakozy amin'ny alàlan'ny fatorana amide amin'ny vondrona alpha-amino an'ny residu glycine N-terminal. Palmitoylation dia karazana fanovana lipida […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Obsidian sy Tourmaline
18 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny obsidian sy ny turmaline dia ny obsidian dia fitaovana tsy kristaly, fa ny tourmaline kosa dia fitaovana kristaly. Ny obsidian sy ny tourmaline dia akora simika. Tourmaline dia mineraly kristaly kristaly, fa ny obsidian dia tsy mineraly satria tsy kristaly ary manana singa simika miovaova. LOHAHEVITRA 1. Topy maso sy fahasamihafana lehibe 2. Inona […]
17 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny PP sy ny LDPE dia ny PP dia fitaovana madio mangarahara, fa ny LDPE kosa kosa na manjavozavo na manjavozavo. Ny teny hoe PP dia midika hoe polypropylene, fa ny teny hoe LDPE kosa dia polyethylene ambany. Ireo dia polymère sy plastika. Votoatiny 1. Topimaso sy fahasamihafana lehibe 2. Inona ny PP 3. Inona ny LDPE 4. PP vs LDPE ao amin'ny Tabular […]
Filed Under: Simia Polymer
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny ferrocene sy ny benzene dia ny ferrocene dia fitambarana organometallic izay mitranga toy ny loko volomboasary miloko miaraka amin'ny fofona toy ny camphor ary ny benzene kosa dia ranoka tsy misy loko manana fofona manitra mamy. Na dia toy izany aza ny tononkalo ferrocene sy benzene, dia miresaka fangaro biolojika roa samy hafa izy ireo. Ferrocene dia organometallic […]
Fahasamihafana eo amin'ny Quoting sy Paraphrasing
Fahasamihafana eo amin'ny integument sy testa
Fahasamihafana eo amin'ny fanitarana sy ny fanitarana
Fahasamihafana eo amin'ny valizy Irlandey sy Scottish
Fahasamihafana eo amin'ny Platinum sy ny volamena fotsy